NDABERE NA KEYBOARD ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ NA LAPTỌỌPỤ ASUS - WINDOWS - 2019
Gbanyụọ nsogbu na bọtịnụ bọtịnụ mebiri na kọntaktị ASUS
Ndagharị kọmputa bụ ngwaọrụ pụrụ iche nke ga-eme ka ị nwee mmetụta zuru ezu dịka onye ọkwọ ụgbọ ala. Na ya, ị nwere ike igwu agba ọsọ kachasị amasị gị ma ọ bụ jiri ụdị simulata niile. Njikọ ngwaọrụ dị otú ahụ na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ site na njikọ USB. Nakwa maka ihe ọ bụla yiri ya, maka wiil ọ dị mkpa iji wụnye ngwanrọ kwekọrọ na ya. Ọ ga-eme ka usoro ahụ nwee ike iji aka ya chọpụta ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, tinyekwara ntọala ya. Na nkuzi a, anyị ga-elele ebe a na-aga na Logitech. Anyị ga-agwa gị banyere ụzọ ndị ga-enye gị ohere ibudata na wụnye software maka ngwaọrụ a.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Logitech G25
Dịka, ngwanro ahụ na-eji ngwaọrụ ndị ahụ (jigọ ụkwụ, pedals, na ngbanwe nke nkedo). Ma enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ na ị nweghị mgbasa ozi na ngwanrọ. E kwuwerị, ugbu a ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ohere ịnweta Internet. Ya mere, ị nwere ike ịchọta, ibudata ma wụnye software maka Logitech G25 n'enweghị ihe isi ike. Enwere ike ime nke a n'ụzọ ndị a.
Usoro 1: Logitech weebụsaịtị
Ụlọ ọrụ nke ọ bụla na-arụ ọrụ na komputa kọmputa na ndị na-ahụ maka kọmputa, nwere ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Na ego ndị dị otú ahụ, na mgbakwunye na ngwaahịa ndị kasị ere ahịa, ị nwekwara ike ịchọta ngwanrọ maka ngwá ọrụ. Ka anyị lebakwuo anya na ihe ndị dị mkpa ka a rụọ na ihe gbasara ngwa nyocha maka steepụ G25.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Logitech.
N'elu elu nke saịtị ahụ ị ga-ahụ ndepụta nke ihe niile dị na mpaghara ahụ. Anyị na-achọ ngalaba "Nkwado" ma kwuo na aha òké pointer. N'ihi ya, menu ndapu ga-apụta n'ụzọ dị ala n'okpuru, nke ị chọrọ iji pịa akara "Nkwado na Download".
N'ihe dị n'etiti n'etiti ibe ahụ ị ga-achọta eriri ọchụchọ ahụ. Na nke a, tinye aha nke ngwaọrụ a chọrọ -G25. Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ga-emeghe n'okpuru, ebe a ga-egosi ọkwa ndị ahụ ozugbo. Họrọ site na ndepụta a otu n'ime eserese ndị dị na foto dị n'okpuru ebe a. Ihe ndị a niile bụ otu njikọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị ị ga-ahụ ngwaọrụ ị chọrọ n'okpuru ebe nyocha ahụ. A ga-enwe bọtịnụ n'akụkụ aha nlereanya. "Gụkwuo". Pịa ya.
Ị ga-achọta onwe gị na ibe zuru ezu maka Logitech G25. Site na ibe a ị nwere ike ibudata ntuziaka maka iji ụgbọelu ahụ, nkọwa data na nkọwa. Ma anyị chọrọ ngwanrọ. Iji mee nke a, anyị na-aga n'okpuru ibe ahụ ruo mgbe anyị hụrụ otu ngọngọ na aha ahụ Download. Nke mbụ, na nke a gbochie anyị na-egosi ụdị sistemụ arụmọrụ ị rụnyere. A ghaghị ime nke a na menu ihe ndapụta pụrụ iche.
Site n'ime nke a, ị ga-ahụ ntakịrị ntakịrị n'okpuru aha software nke dị maka Os dị na mbụ. Na nke a, na-abụghị aha software ahụ, ịkwesịrị ịkọwa ikikere nke usoro ahụ. Ma mgbe nke ahụ gasịkwara, na mpaghara a, pịa Download.
Mgbe nke ahụ gasịrị, faịlụ ahụ ga-amalite ibudata. Anyị na-echere ka njedebe nke usoro ahụ ma mee ya.
Mgbe ahụ nbudata faịlụ a chọrọ maka ntinye nke ngwanro ahụ ga-amalite na akpaghị aka. Mgbe sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ isi ngwanrọ software maka Logitech ngwaahịa.
Na windo a, ihe mbụ anyị na-ahọrọ asụsụ ị chọrọ. O di nwute, Russia adighi na ndepụta nke ederede ndi ozo. Ya mere, anyị na - enye gị ndụmọdụ ịhapụ Bekee, nke a na - ezighị ezi. Họrọ asụsụ, pịa bọtịnụ "Na-esote".
Na windo na-esote, a ga-eme ka ị mara onwe gị na okwu nke nkwekọrịta ikike. Ebe ọ bụ na ederede ya n'asụsụ Bekee, ọ ga-abụ na ọ bụghị mmadụ niile ga-enwe ike ime ya. N'okwu a, ịnwere ike ịnakwere okwu ndị ahụ site na ịchọta eriri achọrọ na windo ahụ. Mee dika egosi na nseta ihuenyo n'okpuru. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye".
Ọzọ ga-amalite usoro ịwụnye ngwanrọ ahụ.
N'oge echichi, ị ga-ahụ windo na ozi ị chọrọ ijikọ ngwaọrụ Logitech na kọmputa gị. Anyị jikọtara stere ụkwụ na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa ma pịa bọtịnụ na windo a "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị icheretụ ntakịrị mgbe onye ntinye ahụ ga-ewepụ nsụgharị Logitech, ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Na windo na-esote, ị ga-achọ ịhụ ụdị ngwaọrụ gị na ọnọdụ njikọ kọmputa. Ịga n'ihu na pịa "Na-esote".
Na windo na-esote ị ga-ahụ ekele na ozi gbasara mmezu nke usoro nhazi ahụ. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Emere".
Window a ga-emechi ma ị ga-ahụ ọzọ, nke ga-agwa gị na nrụnye ahụ zuru. Ọ dị mkpa iji pịa bọtịnụ ahụ "Emere" na ala.
Mgbe emechichara onye nchịkọta ahụ, ngwa Logitech ga-amalite na-akpaghị aka, nke ị nwere ike ịmepụta profaịlụ chọrọ ma hazie ụgbọala gị G25 n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na emere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, akara ngosi ga-apụta na tray site na ịpị bọtịnụ aka nri nke ị ga-ahụ isi ihe ị chọrọ.
Nke a ga-eme ka usoro a kwụsị, ebe ọ bụ na usoro ahụ ga-edozi ngwaọrụ ahụ ma kwadoro ngwanrọ kwesịrị ekwesị.
Usoro 2: Mmemme maka nhazi ngwa ngwa
Enwere ike iji usoro a mgbe ọ bụla ịchọrọ ịchọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ maka ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ. Nhọrọ a na-adaba n'ihe banyere ọkọlọtọ G25. Iji mee nke a, ọ ga-ezuru iji otu n'ime ụlọ ọrụ pụrụ iche ndị e kere maka ọrụ a. Anyị mere nyochaa mkpebi ndị dị na otu n'ime isiokwu ndị pụrụ iche anyị nwere.
Gụkwuo: Usoro kachasị mma maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-egosi gị usoro ịchọta ngwanrọ site na iji Auslogics Driver Updater. Usoro nke omume gị ga-abụ dị ka ndị a.
Anyị jikọtara stere ụkwụ na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.
Wepu usoro ihe omume site na isi akwukwo ma tinye ya. Oge a dị nnọọ mfe, ya mere, anyị agaghị echebara ya echiche n'ụzọ zuru ezu.
Mgbe echichi, gbasaa uru. N'otu oge, scan nke usoro gị ga-amalite na akpaghị aka. A ga-amata ngwaọrụ ndị ịchọrọ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala.
Na ndepụta nke akụrụngwa achọta, ị ga-ahụ ngwaọrụ Logitech G25. Anyị na-akpọrọ ya dị ka egosiri na ihe atụ dị n'okpuru ebe a. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ Melite niile n'otu window.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee njirimara Windows System Restore feature. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a, a ga-amara gị ọkwa na window ọzọ. Na ya anyị pịa bọtịnụ ahụ "Ee".
Nke a ga-esote usoro nkwado na nbudata faịlụ ga-adị mkpa iji wụnye software Logitech. Na window nke meghere, ị nwere ike ịlele ọganihu nbudata. Naanị ichere ka ọ kwụsị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Auslogics Driver Updater utility ga-aga n'ihu na ntinye nke software ebudatara. Ị ga-amụta banyere nke a site na window nke na-apụta. Dị ka ọ dị na mbụ, chere ruo mgbe arụnyere software ahụ.
Mgbe ịchisịrị usoro nhazi software ahụ, ị ​​ga-ahụ ozi gbasara nhazi nke ọma.
Naanị ihe ị ga-eme bụ imechi ihe omume ahụ ma gbanwee ugbọ ụkwụ gị na uche gị. Mgbe nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite jiri ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ike iji Auslogics Driver Updater, ị ga-eleba anya na usoro DriverPack Solution. O nwere nchekwa data dị ukwuu nke ndị ọkwọ ụgbọala dị iche iche na-akwado ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche. N'ime otu nkuzi anyị gara aga, anyị na-ekwu banyere nuances nile nke iji usoro a.
Leekwa: Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa gị site na iji DriverPack Solution
Usoro nke 3: Download software site na iji ID ngwaọrụ
Enwere ike iji usoro a ọ bụghị naanị n'ihe gbasara Logitech G25, kamakwa n'ọnọdụ ndị ịchọrọ ịchọta ngwanrọ maka ihe a na-akpọghị. Ihe kachasị mkpa bụ n'eziokwu na anyị na-amụta ID nke ngwaike nakwa site na uru a anyị na-achọ software na saịtị pụrụ iche. Na hel nke G25 ID nwere ihe ndị na-esonụ:
USB VID_046D & PID_C299
HID VID_046D & PID_C299
Naanị ị ga-edetu otu n'ime ụkpụrụ ndị a ma tinye ya na ntanetị pụrụ iche. Anyị kọwara ihe kachasị mma nke ihe ndị a na nkuzi dị iche. N'ime ya, ị ga-ahụ ntụziaka maka nbudata ngwanrọ site na saịtị ndị dị otú ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-agwa anyị otu esi achọpụta ID a. Ị nwere ike ịnweta ozi a n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu. Ya mere, anyị na-akwado gị ka ị gụọ ihe mmụta dị n'okpuru ebe a.
Nzọụkwụ 4: Nchọnchọ nke ọma maka ndị ọkwọ ụgbọala Windows
Uru nke usoro a bụ na ọ dịghị mkpa ka ị rụnye mgbakwunye ngwanrọ ọ bụla, yana ịnyagharịa site na saịtị dị iche iche na njikọ. Otú ọ dị, njikọ Ịntanetị ga-adị mkpa. Nke a bụ ihe ị chọrọ ime maka nke a.
Gbaa ọsọ "Onye njikwa ngwaọrụ". E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nke a. Kedu otu ị si eme ya adịghị mkpa.
Ihe Ọmụmụ: Mepee "Njikwa Ngwaọrụ"
Na ndepụta nke ngwa niile anyị na-ahụ ngwaọrụ dị mkpa. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụghị usoro usoro ahụ ka a na-ejikwa steeti ahụ ma gosipụta ya "Ngwaọrụ Amaghi Ama".
N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị ịhọrọ ngwaọrụ dị mkpa na pịa nri na aha ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ga-apụta na ị ga-ahọrọ akara mbụ na aha ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga - ahụ window windo nchọpụta. Na ya ịkwesịrị ịhọrọ ụdị ọchụchọ - "Akpaaka" ma ọ bụ "Ntuziaka". Anyị na-akwado iji akpa nhọrọ, dịka na nke a, usoro ahụ ga-agbalị ịchọta ngwanrọ na Ịntanetị na akpaghị aka.
Ọ bụrụ na usoro ọchụchọ ahụ na-aga nke ọma, a ga-ahụzi ndị ọkwọ ụgbọala achọtara ozugbo.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ahụ windo nke ga-esi na nchọpụta na usoro nhazi ahụ pụta. Mmetụta nke usoro a bụ eziokwu ahụ na usoro ahụ anaghị ejikwa ya mgbe niile ịchọta ngwanrọ dị mkpa. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, usoro a nwere ike ịba uru.
Iji otu n'ime ụzọ ndị a, ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa ma wụnye software maka Logitech G25. Nke a ga-eme ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị amasị gị na simulators. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ njehie n'oge nrụnye nke ngwanrọ, dee ihe ndị ahụ. Echefula ịkọwa nsogbu ahụ maọbụ ajụjụ dịka o kwere mee. Anyị ga-anwa inyere gị aka.
Esi chọpụta onye esighi n'aka Instagram
Anyị na-atụle okpomọkụ nke kọmputa ahụ